Kuchengetedzwa kweWebhu Kunobatsira sei SEO | Martech Zone
Wanga uchiziva here kuti kwakatenderedza 93% yevashandisi vakatanga yavo yewebhu kushambadzira ruzivo nekutaipa yavo query muinjini yekutsvaga? Iyi whopping nhamba haifanire kukushamisa iwe.
Sevashandisi veinternet, tajairira iko nyore kuwana chaizvo izvo zvatinoda mukati memasekondi kuburikidza neGoogle. Kunyangwe isu tichitsvaga yakavhurika pizza chitoro chiri padyo, chidzidzo chekuruka, kana nzvimbo yakanakisa yekutenga mazita enzvimbo, tinotarisira kugutsikana nekukurumidza uye mhinduro dzemhando dzinogutsa kutsvaga kwedu chinangwa.
Iko kukosha kwe organic traffic yakaisa yekutsvaga injini optimization mukutarisa, sezvo iri iro rekona rekona yekuvaka zvirinani online kutaridzika. Google ikozvino inogadzira pamusoro 3.5 mabhiriyoni ekutsvaga pazuva uye vashandisi vanoona yayo SERP (yekutsvaga injini peji peji) sechiratidzo chakavimbika chemawebhusaiti kukosha.
Kana zvasvika pakubudirira kweSEO maitiro, isu tese tinoziva nezvakadzika. Kugara nekushandisa zvine hungwaru kwemazwi akakosha zvinokurudzirwa, pamwe nekukwenenzvera ma ALT tag, uchiuya netsananguro dzakakodzera dzemeta, uye uchiisa pfungwa pakuburitsa zvemukati, zvinobatsira, uye zvakakosha zvemukati. Kubatanidza kuvaka uye kubatanidza kuwana zvakare chikamu chepuzzle, pamwe nekusiyanisa magwara emigwagwa uye kushandisa yakakura gadziriso yekuparadzira nzira.
Asi zvakadii nezvewebhu chengetedzo? Iyo inokanganisa sei kuedza kwako kweSEO? Google ndeyekuita kuti internet ive nzvimbo yakachengeteka uye inonakidza, saka ungangoda kusimbisa yako webhu chengetedzo.
SSL haisi Chengetedzo Zvakare zvakare, asi Kukosha
Google yagara ichitsigira dandemutande rakachengeteka uye ichikurudzira mawebhusaiti anofanirwa kuenda kuHTTPS nekutora SSL chitupa. Chikonzero chikuru chiri nyore: dhata inovharidzirwa mukufamba, ichidzivirira chero kushandiswa zvisirizvo kweyakavanzika uye neruzivo ruzivo.
Iyo HTTP vs. hurukuro dzeHTTPS mune mamiriro eSEO akadzingwa muna 2014 apo Google yakazivisa mawebhusaiti akachengetedzeka anogona kusangana nekusimudzirwa padiki. Mugore rakatevera, zvakava pachena kuti chiratidzo chinzvimbo chinotakura huremu hwakawedzera. Panguva iyoyo, Google yakazivisa kuti kuve nesitifiketi cheSSSL kunogona kupa nzvimbo nzvimbo kukwikwidza uye kushanda seyekupwanya pakati pemawebhusaiti maviri ari, zvimwe kana zvishoma, ehunhu hwakafanana.
Kubatana kukuru kudzidza kwakaitwa naBrian Dean, Semrush, Ahrefs, MarketMuse, SimilarWeb, uye ClickStream, vakaongorora miriyoni imwe yekutsvaga kweGoogle uye vakacherekedza kuwirirana kwakasimba pakati penzvimbo dzeHTTPS uye peji yekutanga masosi. Pasina mubvunzo kutaura, izvi hazvireve kuti kuwana SSL setifiketi zvinokupa iwe chinzvimbo chiri nani, uye haisi iyo inonyanya kukosha chiratidzo chiratidzo iyo algorithm inovimba nayo.
Google yakaburitsa zvakare chirongwa chine zvikamu zvitatu yakanangana newebasa rinoita uye rakachengeteka uye yakazivisa kuburitswa kweChannel 68 yekuvandudza muna Chikunguru 2018, inozoratidza zvose HTTP mawebhusaiti seasina kuchengetedzeka mukati meakanyanya kufarirwa webhu browser Iyo yakashinga, asi inhanho inonzwisisika, iyo ichave nechokwadi chekuchengetedzwa kwemigwagwa kuyambuka pasirese webhu, kune vese vashandisi, pasina izvo.
Mawebhusaiti eHTTPS anotarisirwa kuve ekushomeka, asi mazhinji mawebhusaiti vachiri kushamisika nezvazvo sei kuwana SSL chitupa uye nei izvi zvichikosha zvakadaro.ere inongova bhenefiti isingarambike, zvese zviri munzira dzeSEO uye wakabata yakanakisa chiratidzo chiratidzo.
Kugadziriswa kwekuwedzera kwewebsite yeHTTPS kunotarisirwa
Iyo yakaenzana nhanho yekuchengetedza uye kuvanzika kunowanikwa
Mawebhusaiti anowanzo takura nekukurumidza
Yako webhusaiti webhusaiti ine kutendeseka kwakawanda uye inovaka kuvimba (zvinoenderana ne HubSpot Tsvagiridzo, 82% yevakapindura vakati vaizosiya saiti isina kuchengetedzeka)
Dhata rese rakajeka (semuenzaniso kadhi rechikwereti) rakachengetedzwa zvakachengeteka
Pfupi kuisa, neHTTPS, huchokwadi, kuvimbika kwedata, uye zvakavanzika zvinochengetedzwa. Kana webhusaiti yako iri HTTPS, inoita chikonzero chakaringana chekuti Google ikupe mubairo semumwe munhu arikupa kune rese webhu chengetedzo.
Zvitifiketi zveSSSL zvinogona kutengwa, asi kune zvekare zvirongwa zvekuvanzika-yakachengetedzwa pasirese padandemutande iyo inopa yakavimbika yazvino cryptography yemahara, senge Regai Tinyora. Ingo gara uchifunga kuti zvitupa zvinopihwa nesetifiketi chiremera sangano zvinogara kwemazuva makumi mapfumbamwe uyezve zvinofanirwa kuvandudzwa. Iko kune sarudzo yeotomation yekuvandudza, iri zvirokwazvo iri yekuwedzera.
Dzivisa Kuva Anobatwa Nenjodzi dzeCyber
MaCybercrimes akachinja: ivo vava akasiyana siyana, akaomesesa, uye akaoma kuona, izvo zvinogona kukuvadza bhizinesi rako pamatanho mazhinji. Muzviitiko zvakaomesesa, makambani anomanikidzwa kumbomira mashandiro emabhizinesi avo kusvikira zvikanganiso zvekuchengetedzwa kwewebhusaiti zvarongedzwa, izvo zvinogona kukonzeresa kurasikirwa kwemari, kudonhedza masosi, uye kunyange zvirango zveGoogle.
Senge sekurwiswa nevanobira hakusi kunetsa zvakakwana.
Zvino, ngatikurukurei zvakajairika kubiridzira uye kubiridzira kurwisa uye nzira yavanogona kukuvadza yako SEO kuedza.
● Dudziro yeWebhusaiti uye Kushandiswa kweSeva
Kubviswa kwewebhusaiti kurwisa kwewebhusaiti kunochinja kutaridzika kwenzvimbo. Iwo anowanzo ari basa revasina kusimba, avo vanopinda muwebhu dura uye vanotsiva webhusaiti yakachengetwa neimwe yavo uye vanoita imwe yenyaya huru kana zvasvika pakuchengetedzwa kwepamhepo. Muzviitiko zvakawanda, vabiridzi vanoshandisa mukana wekushomeka kweseva uye vanowana mukana wekutonga vachishandisa SQL jekiseni (nzira yekubaya kodhi). Imwe nzira yakajairika inosvika pakushandisa zvisirizvo mafaira ekufambisa (ayo anoshandiswa kuendesa mafaera pakati pevhavha uye nemutengi pakombuta network) yekuwana ruzivo rwakashata (ruzivo rwekupinda) ayo anoshandiswa kutsiva webhusaiti iripo neimwe.
Statistics inoti kwavepo ingangoita 50.000 yakabudirira webhusaiti defacements muna 2017, uye muzviitiko zvakawanda - tiri kutaura pamusoro pekutsanangudza kwemazhinji emawebhusaiti akanaka. Uku kurwisa kwehacker kune chinangwa chikuru: zvakagadzirirwa kushora kambani yako nekukuvadza zita rako. Dzimwe nguva, shanduko dzakaitwa ndedzekunyepedzera (semuenzaniso vabiridzi vanoshandura mitengo yezvigadzirwa muzvitoro zvako zvepamhepo), dzimwe nguva - vanoisa zvisina kukodzera zvemukati uye voita shanduko dzakakomba idzo dzakaoma kupotsa.
Iko hakuna chairo chirango cheSEO chekushomeka kwewebhusaiti, asi nzira iyo webhusaiti yako inoonekwa pane SERP inochinjika. Kukuvara kwekupedzisira kunoenderana neshanduko dzakaitwa, asi zvingangoita kuti webhusaiti yako haizove nemubvunzo kumibvunzo yayaimboita, izvo zvinoita kuti masosi ako adzikire.
Mhando dzakaipisisa dzekubira kurwisa maseva pane ese, izvo zvinogona kutungamira kune zvinotyisa mhedzisiro. Nekuwana mukana weiyo main server (kureva iyo "mastermind komputa"), ivo vanogona kuishandisa nyore uye kudzora akawanda mawebhusaiti ayo anotambirwa ipapo.
Hedzino dzimwe nzira dzekudzivirira kuwira seanobatwa pano:
Sarudza yakavimbika webhu firewall firewall (WAF) - inoshanda seti yemitemo inovhara zvakajairika kurwisa senge muchinjikwa -saiti scripting uye SQL jekiseni, nenzira iyoyo kudzivirira maseva
Chengetedza software yako yeCMS kusvika pari zvino - CMS inomiririra zvemukati manejimendi sisitimu, inova komputa application inotsigira kugadzirwa nekushandurwa kwedhijitari yezvinhu uye inotsigira vashandisi vazhinji munzvimbo yekubatana.
Dhawunirodha uye shandisa chete akavimbika plugins uye madingindira (semuenzaniso vimba neiyo WordPress dhairekitori, dzivirira kurodha mahara madingindira, kurodha kuverenga uye ongororo etc.)
Sarudza yakachengetedzeka yekutambira uye pfungwa kuchengetedzeka kwenzvimbo yeIP
Kana iwe uri kushandisa yako sevha, deredza kusagadzikana nekudzivirira server kuwana
Nehurombo, hapana 100% dziviriro muwebhusaiti, asi nezinga repamusoro rekuchengeteka - unogona kudzora zvakanyanya mikana yekurwisa kwakabudirira.
● Kugoverwa kweMarware
Kugoverwa kweMarware kunowanikwa zvakanyanya kana zvasvika pakurwiswa kwecyber. Sekureva kwemukuru chirevo neKaspersky Lab, yakazara ye29.4% yemashandisi emakomputa akatambura kuburikidza neinenge kamwe malware kurwisa muna 2017.
Kazhinji, vabiridzi vanoshandisa maitiro e spoofing kana phishing kuti vazviratidze semunhu anovimbika. Kana munhu wacho akawira pasi ndokutora software yakaipa, kana kubaya pane iyi link inoburitsa hutachiona, komputa yavo inotapukirwa. Mumamiriro ezvinhu akaipisisa, webhusaiti yacho inogona kuvharwa zvachose: iyo yekubira inogona kushandisa kutonga kure kure kuti ipinde komputa yemunhu wacho.
Neraki rekuchengetedzeka kwewebhu, Google haipambadze chero nguva uye kazhinji inopindura nekukurumidza kuisa mazita kune mamwe mawebhusaiti ane njodzi kana mhosva yekuparadzira malware.
Nehurombo iwe semunhu akabatwa, kunyangwe isiri yako mhosho - webhusaiti yako inotumidzwa kunzi spam kusvika paine chiziviso, ichirega yako yese SEO kubudirira kusvika parizvino ichidzika pasi.
Kana iwe, mwari vachirambidza, ukaziviswa neGoogle mukati meKutsvaga Console yako nezve kubiridzira, software isingadiwe, kana kubiridzira, unofanirwa kutora matanho nekukasira.
Ibasa rako, sa webmaster, kuisa wega nzvimbo iyi, kuongorora kukuvara, kuona kusagadzikana. Kunyangwe zvichiratidzika kunge zvisina kurongeka, zviri kwauri kuti uchenese tsvina uye Kumbira wongororo yewebhusaiti kubva kuGoogle.
Rangarira, Google inogara iri padivi revashandisi uye kuchengetedzeka kwavo. Ziva chokwadi, iwe uchapihwa yakazara rutsigiro kugadzirisa zvinhu kunze.
Zvinokurudzirwa kuti uenderere mberi nekugadzirisa chirongwa chako cheantivirus uye kumhanyisa masheya akajairwa, tora mukana kune akawanda-factor chokwadi chechokwadi sarudzo kuti unyatso chengetedza ako maakaundi epamhepo, uye nekuongorora hutano hwesaiti yako nesimba.
Inoshanda Webhusaiti Kuchengetedza Matipi
Kazhinji kazhinji kupfuura izvo, isu tinotenda mikana yekuti isu tive nyajambwa wecybercrime haigoneki. Chokwadi ndechekuti, zvinogona kuitika kune ani zvake. Iwe haufanire kunyange kumhanyisa bhizinesi rakapfuma kana kuve muhurumende kuti uve chinangwa chingangoita. Pamusoro pezvikonzero zvemari kana zvitendero zvevanhu, vabiridzi vanowanzo kurwisa nzvimbo nekuda kwekunakidzwa, kana kudzidzira hunyanzvi hwavo.
Usaite zvikanganiso zve rookie zvine chekuita nekuchengetedza kwewebhusaiti yako. Zvikasadaro - kungave kana kuti kwete yako SEO kuedza kuri kubhadhara ichave ari mashoma ematambudziko ako. Pamusoro peizvo zvatakataura muchikamu chakapfuura zvine chekuita nemaitiro anokurudzirwa ekudzivirira kusvibiswa kwewebhusaiti, kubiridzira, kubiridzira, uye hutachiona hwe malware, iva nemazano anotevera mupfungwa:
Zviripachena, kugadzira rakasimba password risingafungidzike (tevera Matipi eGoogle emaphasiwedi akachengeteka)
Gadzirisa chero maburi ekuchengetedza (semuenzaniso kutarisisa kwekutarisa kwekuwana manejimendi, zvinobvira kudonha kwedata, nezvimwewo)
Ita shuwa yekunyoresa rako rezita zita neakavimbika mabharani uye tenga yakachengeteka webhu inomiririra
Rethink uyo anokwanisa kuwana yako faira yekufambisa maprotocol uye dhatabhesi
Ita shuwa yekuchengetedza yako webhusaiti uye uuye nehurongwa hwekudzoreredza kana iwe ukabiwa
Ichi chingori chidimbu cheaizi yechando. Icho chokwadi ndechekuti, iwe haungambove wakanyatso chenjera - tora kubva kune mumwe munhu anobatanidzwa zvakananga muwebhu indasitiri.
Pasina mubvunzo, kunatsiridza kuvepo kwako kwepamhepo kunosungirwa sezvo vatengi vanovimba neGoogle kuti vawane ruzivo rwekukurumidza nezvebhizinesi rako uye zvigadzirwa / masevhisi aunopa, asi ivo vanoishandisawo kusefa kuburikidza nesarudzo yavo uye Cherry-sarudza izvo zvakavanakira. Kana iwe ukachengeta mundangariro zvataurwa pamusoro apa matipi ekuchengetedza uye chinja kuHTTPS, uku uchiisa mari muchena ngowani SEO, unogona kutarisira kukwira zvishoma nezvishoma kukwira kuSERP.
Kuchengetedzwa kwewebhu kunofanirwa kuve kwako kwekutanga kukoshesa, uye kwete chete nekuda kwekukohwa SEO mabhenefiti.
Izvo zvinonyanya kukosha kune ruzivo rwekusevha rwakachengeteka rwemunhu wega wega mushandisi, pamwe nekutendeseka kwekutengeserana kwepamhepo. Iyo inoderedza mikana yekukwira uye kugoverwa kwemarware uye mavairasi uye inodzika kumwe kumwe kwakaipa kwekuedza kwematsotsi uko kunosanganisira humbavha hwekuzivikanwa kana zviitiko zvekupaza. Hapana indasitiri inodzivirirwa, saka zvisinei nekutarisisa kukuru kwebhizinesi rako, iwe unofanirwa kuedza nepese paunogona napo kuchengetedza mwero wepamusoro webhusaiti uye kuvaka kuvimba nevatengi vako nevatengi. Muchokwadi, sa webmaster - iwe une basa rekuzviita.
Tags: cybercrimehovegoogle ongororohttp:httpskaperskylets encryptpasswordsSearch Engine Optimizationchengetedza mapasswordchibatisoseospoofingsql jekiseniwebhusaiti ongororo
Nyanzvi mune zvehupfumi nedzidzo, Natasa Djukanovic ndiye mutengesi wekutengesa uye wekushambadzira we Domain.ME, iyo yepasi rose tech kambani inoshanda iyo internet domain ".ME." Akapedza basa rake rese pamharadzano yemabhengi, vezvenhau, hutungamiriri uye tekinoroji, uye ari kuramba achiedza kutsvaga chakavanzika chekuve munzvimbo nhatu dzakasiyana panguva imwe chete.